Xiriirka jaban, Kaniisada aduunka ee Switzerland (WKG)
Mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu waa weyn bulshada reer galbeedka waa cilaaqaadyada - saaxiibtinimada xanaaqday, balanqaadyo aan la hayn, iyo rajo beel. Dad badan ayaa is furay ama khibrad u yeeshay furitaan caruurnimo. Waxaan la kulannay xanuun iyo jahwareer adduun aan degganayn. Waa inaan wax baranaa, mas'uuliyiinta iyo xafiisyadu markasta ma ahan kuwo la aamini karo oo dadku asal ahaan naftooda daryeeli karaan.
Inbadan oo naga mid ahi waxay dareemaan inay luntay adduunkan qalaad. Ma ogin halka aan ka nimid, halka aan hadda joogno, halka aan u soconno, sida aan halkaa u tagno, ama halka aan dhab ahaantii ka tirsanahay. Waxaan isku dayeynaa in aan u wadno halista nolosha sida ugu wanaagsan ee aan awoodno, sida in aan ku dhex lugeyno godad miinooyinka lagu aaso, aanaan muujineynin xanuunka aan dareemeyno iyo annaga oo aan ogeyn in dadaalkeenna iyo nolosheenna ay qiimo leeyihiin.
Waxaan dareemaynaa inaan kali nahay iskuna dayno inaan is difaacno. Waxaan ka xunahay inaan nafteena wax u galno waxaanan aaminsanahay inuu ninku silicayo maxaa yeelay Ilaah waa cadhaysan yahay. Fikradda Ilaah macno malahan adduunka maanta - sax iyo khaladku waa uun aragti
Dadku wax bay ka akhriyaan Ciise oo ku saabsan Kitaabka Quduuska ah waxayna gaarayaan go'aan ah inuu ku noolaa nolol ka sarraysa, ka bogsiiyey dadka oo keliya taabashada, kibista meel aan jirin, ku dul socda biyaha, oo ay hareereeyeen malaa'igo ilaalinaysa oo ay sixir ahaan u bogsiinayaan waxyeelo jir ahaaneed. , Wax shaqo ah kuma lahan adduunka maanta. Sidoo kale, sheekada iskutallaabta lagu qodbay Ciise waxay umuuqataa inay ka go'day dhibaatooyinka nolosha maanta. Sarakiciddiisa ayaa isaga u ah war wanaagsan, laakiin maxaan ugu malaynayaa inay iigu tahay war wanaagsan aniga?
Ciise adduunka wuu soo maray
Xanuunka aan ku dareeno adduun shisheeye waa sax ahaanta xanuunka ee Ciise garanayo. Waxaa lagu gacangeliyay dhunkasho mid ka mid ah xertiisa ugu dhow oo ay ku xadgudbeen masuuliyiinta. Ciise wuu garanayey sida ay u eg tahay in maalin uun la caayo oo maalinta xigta lagu majaajiloodo. Ciise inaadeerkiis, Yooxanaa Baabtiisaha, waxaa dilay taliye ay magacowday Roomanka maxaa yeelay Yooxanaa wuxuu daaha ka qaaday daciifnimada damiirnimada. Ciise wuu ogaa in sidoo kale la dili doono maxaa yeelay wuxuu su’aal ka keenay waxbarista iyo heerka hoggaamiyeyaasha diinta Yuhuudda. Ciise wuu ogaa in dadku u necbahay sabab la'aan asxaabuna ay ka soo horjeedaan. Qofka noocaas ah ee noo daaya xitaa markii aan necbahay waa saaxiib run ah, oo ka soo hor jeeda khaa'in.
Waxaan nahay sida dadka ku soo dhacay wabi baraf ah oo aan dabaalan karin. Ciise waa ninka gelaya biyaha qabow si uu noo caawiyo. Wuxuu ogyahay inaan ku dadaalno sidii aan ku qabsan lahayn. Laakiin dadaalkeennii quusta ahaa ee aan kor ugu qaadnay madaxdeenna, ayaan hoos ugu riixaynaa biyaha.
Ciise sidan buu inoogu sameeyey annaga oo ikhtiyaar u ah inuu ina tusayo jid ka wanaagsan. Laga yaabee inaan ku aamini karno ninkan, Ciise - maadaama uu isagu naftiisa u huray nafteenna anaga ahaan markii aan ahayn cadaawayaashiisa, intee in ka badan ayaan aaminnaa markaan saaxiibbadiis nahay?
Ciise wuu noo sheegi karaa wax ku saabsan nolosha, meesha aan ka nimid iyo meesha aan u soconeyno, iyo sida aan halkaas ku gaari karno. Wuxuu noo sheegi karaa wax ku saabsan khataraha ka jira cilaaqaadka aan ugu yeerno nolosha. Khasab kuma aha inaan isaga aamino - waxaan kaliya isku dayi karnaa inaan aragno hadii ay shaqeyneyso. Haddii aan sidaas yeelno, waxaan ku kori doonnaa aaminaaddayada. Xaqiiqdii, waxaan u maleynayaa inaan ogaan doonno inuu isagu had iyo goor saxsan yahay.
Badanaa ma rabno asxaab had iyo goor sax ah. Waa wax laga xumaado. Ciise ma aha nooca qofka mar walba dhaha, "Waan kuu sheegay". Wuu ka boodaa biyaha, wuxuu diidayaa dadaalkeena si aan u oorinno, wuxuu nagu jiidaa dhanka wabiga wabiga wuxuuna noo ogolaadaa inaan neef qabsanno. Oo aynu tagno ilaa aan mar kale wax qaladno oo aan ku dhex dhacdo webiga. Ugu dambeyntii, waxaan baranay inaan weydiinno halka ay khataraha ku turunturooddu yihiin iyo halka barafka khafiifku yahay si aynaan ugu baahanayn inaan badbaadno.
Ciise samir buu leeyahay. Isagu wuxuu inaga dhigaa khaladaad xitaa wuxuu naga yeelaa khaladaadkaas. Wuxuu na siiyaa wax barasho - laakiin weligiis ma cararayo. Waxaa laga yaabaa inaan hubin inay jirto, laakiin waxaan hubin karnaa in samirka iyo is cafintu ay u shaqeeyaan si ka fiican cadhada iyo ka fogaanta xagga xiriirka. Ciise kuma mashquulin shakikeenna iyo aaminaaddeenna. Wuu fahmay sababta aan uga labalabeynay inaan aamino.
Ciise wuxuu ka hadlayaa madaddaalo, farxad, dhammaystir dhab ah oo waara oo aan dhammaanin, dadka sida runta ah kuu jecel, xitaa haddii ay yaqaanaan waxaad tahay. Waxaa naloo abuuray cilaaqaad, taasi waa sababta aan ugu dooneynno iyaga sidaas iyo waa waxa Ciise na siiyo. Wuxuu doonayaa in ugu dambeyntii aan isaga u tagno oo aan aqbalno casuumaaddiisa bilaashka ah xaflad farxad leh, deggan.
Hanuuninta rabbaaniga ah
Waxaan leenahay nolol horteenna mudan in la noolaado. Taasi waa sababta uu Ciise raalli uga yahay xanuunka adduunkan inuu na tuso adduun ka fiican. Waxay u eg tahay inaan ku dul soconno socdaal cidla ah oo aan dhammaad lahayn oo aan garanayn dariiqa loo maro. Ciise wuxuu ka tegayaa raaxada iyo amniga jannadiisa sharafta leh si uu uga hortago ciidaha oo uu ina tuso haddii aan badalno uun jihada oo aan isaga raacno, inuu ina siin doono wax kasta oo aan rabnay.
Ciise wuxuu kaloo inoo sheegayaa halka aan joogno. Janno kuma jirno! Noloshu way xanuunaysaa. Waan ognahay tan oo isaguna wuu garanayaa isaga. Wuxuu soo maray. Taasi waa sababta uu isagu doonayo inuu uga baxo fowdadaas oo uu noogu suurogaliyo inaan ku noolaano nolol aad u fara badan oo uu ugu talogalay bilowgii.
Xiriirka qoyska iyo saaxiibtinimadu waa labo ka mid ah kuwa ugu farxadda badan, xiriirinta nolosha ee qancisa markay si wanaagsan u shaqeeyaan - laakiin nasiibdarro markasta si fiican uma shaqeeyaan taasina waa mid ka mid ah dhibaatooyinka noogu weyn ee nolosha.
Waxaa jira dariiqooyin sababi kara xannuunno waxaana jira siyaabo kor u qaada farxadda iyo farxadda. Mararka qaarkood waxaan isku daynaa inaan ka fogaano xanuunka iyo farxadda. Markaa waxaan u baahan nahay hanuun marka aan u dagaallanno jidkeenna lamadegaanka bilaa raad ah. Wax yar sug - waxaa jira raadad qaar - raadadkii Ciise oo muujinaya qaab nololeed ka duwan. Waan heli doonnaa meeshuu joogo hadaan raacno raadkiisa.
Abuuraha wuxuu doonayaa xiriir naga dhexeeya, saaxiibtinimo jacayl iyo farxad, laakiin waxaan maqnaa oo aan ka baqeynaa. Waxaan khiyaanaynay abuurkeenna, waan qarinay oo diiday inaan la joogno. Maanaan furin waraaqihii uu diray. Haddaba, Ilaah wuxuu ku yimid jidhka, Ciise, adduunkooga inuu inoo sheego inaanan cabsanaynin. Wuu na saamaxay, wuxuu noo diyaariyay wax ka fiican sidii hore, wuxuu doonayaa inuu ku laabto gurigiisa, halkaasoo nabadgelyo lagu dareemo.
Qofkii farriinta waday waa la diley, laakiin tani kama dhigeyso in fariintiisu meesha ka baxdo. Ciise had iyo jeer wuxuu ina siiyaa saaxiibtinimo iyo cafis. Wuu nool yahay oo keliya nama siiyo oo wuxuu ina tusiyaa jidka, laakiin sidoo kale inuu inala safro oo uu naga kalluumaysto biyihii barafka leh haddii aan ku dhex jirno. Wuxuu nagula soo raaci doonaa qaro iyo dhuuban. Wuxuu ka walaacsan yahay samaqalkeena iyo samirkeena ilaa ugu dambayn. Waan ku kalsoonaan karnaa isaga, xitaa haddii qof walba uu naga niyad jabinayo.
Saaxiibkaaga sida Ciise, uma baahnid inaad ka cabso cadaawayaashaada. Wuxuu leeyahay dhammaan xoogga iyo xoogga adduunka. Wali wuxuu ku casuumay qof kasta xafladiisa. Ciise shaqsiyan wuu kugu casuumay xafladiisa isagoo ku bixinaya jannada. Jidkiisii ​​ayuu uga baxay si uu kuugu soo casuumo. Waxaa loo dilay dhibkiisa, laakiin taasi kama hor istaagayso inuu ku jeclaado. Maxaa kaa galay Laga yaabee inaadan weli diyaar u ahayn inaad rumeysatid inuu qof daacad u noqon karo. Wuxuu fahamsan yahay in waayo-aragnimadaadu ay kaa dhigayso inaad shaki ka qabtid sharraxaadaha noocaas ah. Waxaad ku kalsoonaan kartaa Ciise! Iskuday. Doontiisa fuulo. Waad ka boodi kartaa hadhow haddii aad rabto, laakiin waxaan u malaynayaa inaad dooni doontid inaad joogtid isla mar ahaantaana waxaad bilaabi doontaa naftaada inaad ruxdo si aad ugu martiqaado dadka ku daadanaya inay doonnida fuulaan.